Magacaabistaydii Iyo Maagistaydii Laba Isku Lammaanaa “Boobe Yuusuf Ducaale” Qormadiisii 16aad | Home: Saylicipress.Com
Magacaabistaydii Iyo Maagistaydii Laba Isku Lammaanaa “Boobe Yuusuf Ducaale” Qormadiisii 16aad
Hergeisa(SPN) Waxa laga yaabaa in aydaan sidiisa u garan xigashadii aanu shalay ka soo qaadannay Damal Cabdilqaadir Koosaar Cabdi, ee bal hadda aan faah-faahin kooban ku samaynno. Hadda intaasi af-lagaaddaba ha igu ahaato e’. Nin Mujaahid ah oo tilifoon ii soo diray ayaa I xusuusiyay in aan dib ugu yara noqdo.
Damal Shahiid Koosaar xigashadiisii shalay waxay daarranaeyd marka aynu xaaladda maanta taagan ku eegno in aanu qofna hadba sida uu damco yeeli karin. Aan hoos u sii daaddego. Qof reer Somaliland ihi xukuumad markaa taagan inta uu ka soo hor jeesto, xukuumad waqti kale taagan oo labaduba Somaliland yihiin; ma odhan karo mid waan taagersanahay oo dimuqraadiyadda ayaa ii oggol, midna waan ka soo hor jeedaa oo isla dimuqraadiyaddii ayaa ii oggol. Qof Somaliland aamminsani ama ahi mucaarad kuma noqon karo Somaliland. Marka xaaladda maanta taagan lagu eego, waa sidaa, sida uu u jeedaa Damal Cabdilqaadir Koosaar Cabdi.
Si fiican oo xogogaalnimo ah ayaan ula socday waxyaabaha wasaaradda ka socday iyo waxyaabaha waxyeellada ku ahaa hawlaha Qarankaba. Tan iyo maalintaa Heshiiska lala galay Shirkadda ‘Satelite-ka’ ee ‘Hotbird’ xafiiska Wasiirka Madaxtooyada iyo Bashe Cawilba waxa kale oo ay ku hawlanaayeen sidii loo beddeli lahaa Heshiiska ‘Thaicom’ oo London ayaa laga raadinayay meel looga guuro. Dhinaca London waxa hawshan kaga jiray Agaasimaha TV-ga Qaranka oo xidhiidh joogta ah la lahaa Madaxtooyada iyo Wasaaradda Warfaafintaba. Hadda in Xukuumadda kharashyada laga yareeyaa wax ceeb ah ma laha, aniguna waxba kama qabin, bal se qaabka wax loo beddelayaa mid muuqda ama xalliiban (transparent) waa in uu noqdaa oo la wada arkayo.
Maa daama aan Wasaaradda imid iyada oo ay xaalad caynkan ahi taagan tahay, aniguna dhinaca ayaan kaga qabtay. Haa……Wasiir Xirsi waan kala hadli jiray arrimahan la xidhiidhay sidii ‘Satelite’-ka ‘Thaicom’ looga guuri lahaa, bal se Baashe Cawil kalama aan hadli jirin kol haddii aanu jirin xil qaran oo aanu wadaagnay oo na kulminayay.
Maalmahaa maalin ka mid ah ayaa e-mailka dhinaca London Agaasimaha TV-gu iiga soo geliyay Heshiis la rabay in aan wasiir ahaan soo saxeexo oo la ii sheegay in Shirkad la yidhaahdo ‘RR Sat’ lala gelayo. Heshiiskii waan saxeexay, waxaanan ku celiyay Agaasimihii TV-ga Qaranka ee London aniga oo ogeysiiyay Wasiirka Madaxtooyadana.
Maalmo ka dib ayaa yaabkii iigu weynaa igu dhacayaa. Waxay ahayd in Heshiiskaas qabyada ahaa la ii soo celiyo iyada oo uu dhinacii kalena soo saxeexay. Waxba la ii ma soo celin. Dhowr maalmood ka dib ayaan si balaf ah ku maqlay Heshiiskii wuu hirgalay oo Baanka Dhexe ayaa lacagtii diraya. Anigu mar walba waxaan la taagnaa Heshiiska ‘Thaicom’ waxa laga baxayaa ama la jebinayaa oo keliya, marka ‘Satelite’ kale oo beddeli kara la helo. Maalin danbe ayaan Baankii Dhexe tegay. La-ye lacagtii Heshiiska ayaa la dirayaa oo hadhow Wasaaradda Warfaafintu bixin doontaa. Anna yaabay oo idhi: “Yaa amarkaa bixiyay.” Qoraal iyo af midna la ii sheegi waa, aniguna madaxdii Baanka waxaan u sheegay oo aan kaga tegay in aanay Wasaaradda Warfaafinta ee aan mas’uulka ka ahay Heshiiskan aqoonsanayn ilaa uu sharci noqdo oo uu dhinaca kalena soo saxeexo. Waxyaabahan sida caadiga ah aad ugu sheekaysataan ayuun baan idiin qorayaaye wax kale ha u qaadanina. Ma is-tidhaahdeen odeygu wuxu yar muujiyay dhego-adayg iyo debecsanaan la’aan aan loo baahnayn. Bal adba!
Been ku hadli maayo e’, aniga oo Juba iyo Koonfurta Soodaan jooga ayaan ka fekerayay in TV-ga laga hoos-saari doono Wasaaradda, ka dibna xaalku gawaan cidla’ ah noqon doono. Bal hadda sheekadan u fiirsada. Agaasimaha TV-ga Qaranka ee maanta xilkaa hayaa beri hore ayuu ka yimid dalka Ingiriiska. Waa waqtigii Hargeysa laga furayay Hargeisa International Book fair-ka (HIBF). Guriga shaqaalaha ayaan ku arkay ama kula kulmay maalmihii loo diyaargaroobayay oo ahayd bishii Juulay. Isaga oo laba bilood joogay Hargeysa gudaheeda ayaanan maalin keliya arkin ama aanu xafiiska iigu iman aniga oo Wasiir u ahaa, xaqiiqaduna waxay tahay in aan ugu magacawnaa bal se cid kale mas’uul ka ahayd una ahayd. Hadalka waxba intaa u dhaafi maayo.
Wuxu ninkaasi ka dhexeeyay Xafiiska Agaasimihii hore ee TV-ga Qaranka iyo Madaxtooyada gaar ahaan ninka Baashe la yidhaado. Shaki igagama jirin in uu jiray qorshe la fulinayay. Dhacdooyin taxan ayaa ii muuqday: beddelaaddii Agaasimaha Guud, Hanti-dhowrkii, Xadhiggii Agaasimihii Maamulka iyo Xisaabaadka ee TV-ga iyo saansaan badan oo kale. Agaasimaha Maamulka iyo Xisaabaadka ee TV-ga Qaranka waa ay ku adkaatay in ay cid kale ku beddelaan, waayo cid kasta oo iman lahaydba waxay ahayd mas’uuliyad aan wasiir ahaan u lahaa oo aan la ii dhaafi karayn. Maxaa loo danaynayay TV-ga? TV-ga wax kale oo loo danaynayay ma jirto mana jiri karin oo aan ahayn dhaqaale. Halkii uu TV-ga Qaranku ka gargaari lahaa hay’ado warfaafineed, ayaa laga door-biday in ay qofaf ku danaystaan sida aan is-idhi. Hadda waa malahayga, in ay dhacdana la arkee. Xidhiidhadii e-maillada waxyaabo badan oo aan ka soo xigan karo ayaa jira oo aanan u hollanayn bal se ka sarriiganayo.
Bal hadda u fiirsada tiro-koobyada aanu hore idiin siinnay. Qaaradda Maraykanka saddex qof ayaa TV-ga Qaranka uga hawl-gala, magaalada Londonna 14 qof. Ma caqli baa? Oo miyaad ka siisanaysaan?
Radio Hargeysa haddii aad u baahato Jadwalka uu hawada ku galo, toddobaadkiiba mar ayaa la sameeyaa oo aad garanaysaa saacad kasta iyo maalin kastaba waxaad dhegaysan doonto. Halka TV-ga Qaranku aanu lahayn jadwal caynkaas ah, xataa mid maalinle ah. Shaqaalaha dibaddu waa 34 iyo 85 shaqaale ah oo gudaha Hargeysa iyo gobollada ka hawl-gala. Mushkiladduna ma aha shaqaalaha, bal se waa hoggaaminta oo tan iyo maalintii TV-ga la taagay aan wax hawl ah qaban, saacado ku soo hamaansaday oo ay si habaqle ah u buuxiyaan mooyaan e’. TV-ga Qaranka ma cid baa ka dareentay barnaamajyo naf leh oo shaqaalaha London ka hawl-galaa soo diraan. Halkaa qudheeda mushkiladdu ma aha shaqaalaha bal se waa hagidda iyo agaasinka. Waxa noo qorshaysnayd in shaqaalahaa la dhimo, hawl-gelintoodana la hagaajiyo. Far ayuun baan idiin daray, ee qabyada meesha taallay waa ay badan tahay.
Wargeyska Dawan waxa ka hawl-gala in ka badan 45 qof. Wargeysku ra’yal-caamka wax kama beddelo, dhaqaale ma soo hooyo. Bal hadda idinku sheega sababta ay u jirto. Waxaad ag dhigtaan kuwa gaarka ah ee afarta qof ka hawl-galaan. Bal adba! Mar kasta mushkiladdu shaqaalaha ma ahaa waayo wax badan ayaa lagu qaban lahaa, bal se hoggaamin iyo hal-abuur la’aan ayaa jirta. Hubsiino la’aanta iyo xog-la’aanta ayaa wax walba ka daran. Shaqaalahaasi waxay habi lahaayeen TV-ga iyo Radioga haddii la jihayn lahaa oo la hawl-gelin lahaa. Qorshe hawleed istaraatejiya oo shan sannadood ah ayaanu u samaynnay oo weliba xil-wareejintii ku darnay.
Madaxweynaha ayaa ii yeedhay habbeennimadii sida aan ku helay farriin tilifoon ahayd. Aniga oo yar xanuunsanaya oo hargab kala imid Addis-Ababa oo roobbanayd, ayaan sii luuday. Dooddan iyo sheekadaniba waxay ka dhacayaa guriga Madaxweynaha. Madaxweynuhu wuxu la soo fadhiistay laba warqadood oo gacan ku qornaa, muraayadahii indhahana waa uu xidhnaa. Waxaan is-leeyahay warqaddu khad cas ayay ku qornayd, qalinna waa uu haystay, sidanna waxa u dhacay kulankayagii:
Booliiska Kenya Oo Mombasa Ku Dilay Xubno Ay Ku Sheegeen Inay Xiriir La Lahaayeen Xarakada Al-shabaab Ee Soomaaliya Ururka Haweenka Soomaliyeed Oo Maanta Muqdisho Ku Doortay Hogaan Cusub +Sawirro